प्रितम आचार्यको अर्को धमाकेदार प्रस्तुति, फेरि पाए १०० % (भिडियो) » लोक संगीत पारखी
१९ फाल्गुन २०७५, आईतवार १८:३४
काठमाडौँ। भारतको चर्चित टेलिभिजन च्यानल ‘जी टिभी’को चर्चित बालगायन रियालिटी कार्यक्रम ‘सारेगामापा लिटिलच्याम्प’मा नेपालका दुई बालगायकले तहल्का मच्चाइ रहेका छन्। नेपालका प्रितम आचार्य र आयुष केसीले आफ्नो प्रस्तुति ले जज र जुरी मेम्बर सबैको मन जित्न सफल भएका छन्। यसैबीच ‘जी टिभी’ले चर्चित बालगायन रियालिटी कार्यक्रम ‘सारेगामापा लिटिलच्याम्प’को प्रोमो सार्वजनिक गरेको छ।
प्रोमोमा प्रितमले अर्को धमाकेदार प्रस्तुति दिएको देख्न सकिन्छ । प्रोमोमा देखिए अनुसार प्रितमले आफ्नो प्रस्तुतीमा १०० मा १०० प्रतिशत ल्याएका छन्। उक्त गायन रियालिटी शो को टप १५ मा परि सकेका प्रितमले पहिलो राउन्डमै १००% मा १०० % पाएका थिए। उनले गत हप्ताको प्रस्तुतिमा पनि १०० % नै पाएका थिए। उनले प्रस्तुति दिएको एपिसोड आइतबार बेलुका ९:१५ मा प्रसारण हुनेछ।
उनका धेरै गीत तथा कभर गीतहरु य़ुटुबमा प्रशस्त छन् । इटहरी ५ स्थायी घर भएका प्रितम संगीत र पढार्इलाई सँगसँगै लागिरहेका छन् । आधुनिक, शास्त्रीय दुवै कसिमका संगीतहरूमा कलात्मक तरिकाबाट आवाज दिने शक्ति भएका प्रितमको सुमधुर आवाज ले जोसुकैलाई भावुक बनाइदिन्छ । हेर्नुस् प्रोमो।
अस्ट्रेलिया बाट नरेश रेग्मी क्यार्नि होला खै" भम्दै बजारमा आए …(भिडियो सहित)
लोक प्रिय गायक पशुपति शर्मा र सम्झना भण्डारीको आवाजमा श्री स्वस्थानी भजन(भिडियो सहित)
थामिएन कसैको आँशु सात कक्षामा पढ्ने अंकीत संग्रौलाको भाषणले हलभरिका सबै मनिसमा रुवाबासी (भिडियो सहित...
शान्ती श्रि परियार ले फेरी सवैका आशु आउने गित गाईन चेली(२) मन थामेर हेर्नुहोला भिडियो ,
अशोक को गीतमा भुईकटहर | भिडियो खेलेबापत कति पाए पारिश्रमिक ? अशोकबारे दिपकले यसो भने |
आहा ! अचम्मका जुम्ल्याहा दिदी-बहिनी (भिडियो सहित)